အကောင်းဆုံး ဖြတ်ပိုင်း Glass Slat Anti-Slip ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံးအရည်အသွေး ဖြတ်ပိုင်း Glass Slat Anti-Slip ကိုရှာဖွေရန်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ထောင်ခြင်းကတည်းကကျနော်တို့၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ပေါင်းစည်းတဲ့ပြည့်စုံသောအုပ်စုသို့ငယ်လေးတစ် enterprise မှဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ ဖြတ်ပိုင်း Glass Slat Anti-Slip။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများကိုစိတ်ကျေနပ်မှုဖောက်သည်များ၏ကြီးထွားလာစာရင်းကသဘောကျလိမ့်မည်ဆိုသည်ကိုသေချာဖြစ်ကြ၏။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ငါတို့နှင့်အတူကြာမြင့်စွာနဲ့အောင်မြင်သောစီးပွားရေးဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်တယ်။
။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကျိုးခံစားခွင့်အပေါ်အခြေခံသည့်ရေခြားမြေခြားဖောက်သည်များနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုစောင့်မျှော်နေကြသည်။ သင့်ကိုငါတို့နှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလိုလျှင်အခမဲ့ခံစားကြည့်စေလိုပါသည်။
ပုံစံ - 4
ဤအရည်အသွေးမြင့် Topcoat သည်ကျယ်ပြန့်သောလျှောက်လွှာများနှင့်မချောသောအချောလိုအပ်သောမျက်နှာပြင်များအားလုံးအတွက်သင့်လျော်သည်.
ရိုးရှင်းသောဆောက်လုပ်ရေး,ခိုင်ခံ့သောကော်,အားကောင်းတဲ့ဆန့်ကျင်-စလစ်အကျိုးသက်ရောက်မှု,နှင့်2နှစ်ကျော်၏ကြာရှည်ခံမှု(အမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုပေါ်မူတည်).
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.antisliptreatment.com.tw/my/anti-slip-glass-coating.html
သို့: MaKuang Chemical Co., Ltd.
အကောင်းဆုံး ဖြတ်ပိုင်း Glass Slat Anti-Slip ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် ဖြတ်ပိုင်း Glass Slat Anti-Slip ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ ဖြတ်ပိုင်း Glass Slat Anti-Slip ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
Anti Slip Glass Coating	| Peinture Sol Beton Exterieur Antiderapant	| Glasbeschichtungen	| Средство Против Скольжения Для Стеклянного Пола	| Agente Anti-Derrapante Para Piso De Vidro	| Vernice Antiscivolo Per Pavimento In Vetro	| एंटी स्लिप ग्लास कोटिंग	| Recubrimiento De Vidrio Antideslizante	| Antislip glascoating	| طلاء زجاجي مضاد للانزلاق	| Lớp phủ kính chống trượt	| เคลือบแก้วกันลื่น	| Lapisan Kaca Anti Selip	| অ্যান্টি স্লিপ গ্লাস লেপ	| Kaymaz Cam Kaplama	| 玻璃纖維防滑塗料